Maxaa ka cusub saakay Ceel-baraf ? | Baydhabo Online
Maxaa ka cusub saakay Ceel-baraf ?
Degaanka Ceel-baraf oo ka mid ah Degaanada hoostaga Degmada Mahadaay ee Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa saakay xaaladiisa waxa ay tahay mid degan, waxaana shalay halkaasi ka baxay Ciidamada Dowladda Federaalka.
Mid ka mid ah Dadka Degaanka ayaa Risaala u sheegay sababta ay Ciidanka Dowladda Federaalka uga baxeen Degaanka Ceel-baraf in ay ku maleen Ciidanka in ay doonteen Mushaaraadkooda.
Sidoo kale Qofkan la hadlay Risaala ayaa sheegay xaalada ka jirta Degaanka Ceel-baraf in ay tahay mid aan laga hadli karin, maadaama Degaanka uusan waxba dhaamin mid go’doonsan, sidoo kalena ay ka jiraan Abaaro daran, loona baahan yahay in gar gaar lala soo gaaro.
Wararka qaar ayaa sheegaya dadkii ku dhaqnaa Degaankaasi in ay mar hore ka barakaceen halkaasi, marka laga reebo dad yar oo ku haray Degaanka, maadaama Degaanka ay ka jiraan xaalado adag oo ay ugu horeyso Biyo la’aan.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo aan xiriir la sameynay ayaa ka gaabsaday in ay faah faahin dheeraad ah ka bixiyaan arrintaasi, iyaga oo sheegay in Degaankaasi ay ka jirto xaalado adag.